Tababarihii Hore ee Xulka Ghana iyo Naadiga Dynamo Moscow oo Loo Dhiibay Xulka Ethiopia
HomeAfricaTababarihii Hore ee Xulka Ghana iyo Naadiga Dynamo Moscow oo Loo Dhiibay Xulka Ethiopia
Xidhiidhka kubada cagta Ethiopian ayaa shaaca ka qaaday inay heshiis la galleen tababaraha reer Portuqiis ee Mariano Barreto inuu noqdo tababaraha rasmiga ah ee xulka kubada cagta qaranka Ethiopia.
Tababarahan hore u soo laylyay qaranka Ghana ayaa la wareegay Ethiopia Khamiistii sida uu cadeeyey gudoomiyaha xidhiidhka kubada cagta Ethiopia, mr Juinedi Basha.
“Waxaanu u dooranay Barreto inuu noqdo tababaraha cusub, waxaanu isla waafaqnay xeerarka iyo xaaladaha shaqo,” ayuu gudoomiye Basha ku yidhi BBC Sport.
Macalinka cusub ayaa bedeli doona Sewnet Bishaw, oo shaqadan laga eryay bishii February kadib markii xulka qaranku natiijo fiican ka keeni kari waayay isreeb reebka koobka qaarada ee Koonfur Afrika lagu qabanayo.
Barreto ayay shaqadiisa koowaad noqon doontaa inuu xulka u horkaco koobka qaramada qaarada Afrika ee sanada 2015 ka oo Morocco marti gallin doonto.
Tababarahan 57 jirka ah ayaa iska casilay shaqada xulka Ghana bishii September sanadkii 2004 tii kadib markii uu maamulayay mudo 9 bilood ah , laakiin is faham waa soo dhex gallay isaga iyo xidhiidhka kubada cagta ee wadankaasi ayaa aakhirkii sababay shaqo ka tagistiisa.
Wixii intaas ka dambeeyey wuxuu dib ugu noqday Portugal waxaanu tababare u noqday naadi ka dhisan wadankaas oo la yidhaahdo Maritimo, waxa kale oo uu soo laylyay kooxo Yurub ka dhisan oo ay kamid tahay kooxda Ruushka ah ee Dynamo Moscow iyo Kuban krasnado.
Wenger Oo Shaaciyey Inaanu Arsenal Ka Tagayn Kadib Guushii FA Cup Ee Soo Afjartay Sagaal Sanno Oo Koob La’aan Ah